Kismaayo - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Kismayo)
Dagmo in Jubbada HooseTemplate:SHORTDESC:Dagmo in Jubbada Hoose
Kismaayo (Af Ingiriis : Kismayo; Af carabi: كيسمايو‎‎; loo qoro: Kīsmāyū; Italian: Chisimaio) waa caasimada gobolka Jubbada Hoose, waxaayna caasimada Muqdisho u jirtaa 528km. Kismaayo waxaa hormaro Wabiga Jubba oo biyahiisa ku shubo Badweynta Hindiya. Waxa uu maraa meel 15km u jirta magaalada. oo u dhaw Goobweyn, Shacabka degan magaalada Kismaayo waxaa ay gaarayaan ilaa 73,300 oo qof, (dad tiriskii lagu soo qiyaasay sanadka 2011). Dadka dago magaalada kismaayo waa dad is jecel kahor dagaaladi sokeeyana qabiil lagama aqaanin magaalada waxaana la isgu yeeri jirey reer kismaayo ama reer jubada hoose. Dowladii Ajuuraan, waxaana ku xigay Saldanada Geledi. Sanadka marka oo u dhaxeeyay 1836di ilaa 1861di waxaa deegaanada jubooyinka oo markii hore loogu yeeri jiray Bassa Jubba sheegan jiray saldaanadii Muscat (hadda loo yaqaano Cumaan). Sanadka marka oo ahaa 1925 goblada jubooyinka waxaa ka mid noqdeen Talyaaniga ee Soomaaliya. Taariikhda marka ee ahayd 1 Luuliyo 1960 kii waxaa labadii gobol ee Koonfur ta iyo Woqooyiga kismaayo waxay qayb ka noqotay goboladii xoroobey ee Jamhuuriyada Soomaaliya, kismaayo waxaa ka mid eheed meelaha ee dagaalada ka dhacaan.
1 Degmooyinka Gobolka Jubbada Hoose
2 Xaafadaha Kismayo
3 Kista, Caasimada sedexaad ee Soomaaliya
5 Maamulka iyo Sharciga
6 Cimilada Kista
Degmooyinka Gobolka Jubbada Hoose
Kismayo oo caasimadda ah ahana magaalada Afarad ee ugu wayn soomaaliya
Afmadoow,Jamaame,Badhaadhe, beerxaani, beerxaani waxaa hoos yimaado hoosingaw maxamud xareed oo geel ku raaci jiray
Kismaayo waxay ka koobanan jirtay dagaaladii ka hor 4 Xaafadood oo waawayn. waxayna kala yihiin: Farjanno, Faanoole, Calanleey,iyo Shaqaalaha. hada waxaa lagu daray 2 xaafad oo kala ah ISKU FILAN iyo GUULWADE
Kista, Caasimada sedexaad ee Soomaaliya
Muqdisho Hargaysa Kismayo iyo Baydhabo ayaa balaartay iyaga oo saldhig u ahaa labadii gumayste ee wadanka soo kala maamulay, Talyaaniga iyo Ingiriiska, sida ay isugu xigaan.
Kismaayo waa caasimada afaraad ee Soomaaliya xiligii xukumadii siyaad bare waxayna ku taalaa koonfurta fog ee Soomaaliya. Waxaa magaalada xariir dhaqaale la leh magaalooyinka waawayn ee dhaca somalia iyo weliba gobolka somalida ee kenya oo la dhihi karo waa magaalooyin ay mataano yihiin . Ganacsiga Kismaayo wuxuu gaaraa dhamaan gobolada Soomaalida Kenya ilaa wadanka Itoobiya. waana magaalo caan ku ah dhoofinta dhuxusha iyo ganacsiyo kale oo waweyn Waa gobolada ugu qanisan Somalia Jubooyinka haddii ay tahay xoolo beero bad iwm,
Magaalada Kismaayo waa isha dhaqaalaha Dowlad goboledka jubaland : waxaa ku yaal 4 dugsi sare iyo wax ka badan 7 dugsi hoose dhexe. Afarta dugsiyada sare waxaa kamid ah Iskuulka Max'ed Jaamac, Faanoole, Jubba, Guulwade iyo weliba dugsiga Axmed Bin Xambal.
Bahda waxbarashada ee degmada Kismaayo iyo guud ahaanba gobolka J/hoose waxay ku mideeysanyihiin dallad lagu magacaabo (JEN) JUbba Education Network, taasoo saldhigeedu yahay Kismaayo.
Sidoo kale magaalada Kismaayo ayaa waxaa siweyn looga bartaa culuumta kala duwan ee diinta Islaamka, iyadoo ay magaalada ku yaallaan madaaris kala duwan oo lagu barta diinta suuban ee islaamka.
Maamulka iyo Sharciga
Magaaladda Kismaayo waxaa hada maamula mamul km
Faahfaahin Cimilada Kismaayo
Roobka cm (Faro)
Wikimedia Commons waxee heysaa war la xiriiro Kismaayo.
↑ "Weatherbase: Historical Weather for Kismaayo, Somalia". Weatherbase. 2011. Retrieved on 24 Nofeembar, 2011.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Kismaayo&oldid=203560"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 16 Luuliyo 2020, marka ee eheed 08:39.